Computer Systems – Tagged "CVM" – ICT.com.mm
Corsair iCUE 5000X RGB Tempered Glass Mid-Tower ATX PC Smart Gaming Case (Black)K440,000
Corsair 275R Airflow Tempered Glass Mid-Tower Gaming Case (White)K209,000
Corsair 275R Airflow Tempered Glass Mid-Tower Gaming Case (Black)K209,000
Corsair Obsidian Series 1000D Super-Tower CaseK1,143,000
Corsair iCUE 5000X RGB Tempered Glass Mid-Tower ATX PC Smart Gaming Case (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Case Dimensions: 520mm x 245mm x 520mm Maximum GPU Length: 400 Maximum PSU Length: 250 Maximum CPU Cooler Height: 170 Expansion Slots:7vertical +2horizontal...
Corsair 275R Airflow Tempered Glass Mid-Tower Gaming Case (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Case Dimensions: 457mm x 216mm x 455mm Maximum GPU Length: 370mm Maximum PSU Length: 180mm Maximum CPU Cooler Height: 170mm Expansion Slots:7Case Drive Bays: (x2)...
Corsair 275R Airflow Tempered Glass Mid-Tower Gaming Case (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Case Dimensions: 457mm x 216mm x 455mm Maximum GPU Length: 370mm Maximum PSU Length: 180mm Maximum CPU Cooler Height: 170mm Expansion Slots:7Case Drive Bays:...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Case Dimensions: 800mm x 505mm x 800mm Maximum GPU Length: 400mm Maximum PSU Length: ATX - 225mm, SFX - 140mm Maximum CPU Cooler Height: 180mm Expansion Slots:...
Corsair Carbide Series 175R RGB Tempered Glass Mid-Tower ATX Gaming Case (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Case Dimensions: 418mm x 210mm x 450mm Maximum GPU Length: 330 Maximum PSU Length: 180 Maximum CPU Cooler Height: 160 Expansion Slots:7Case Drive Bays: (x2)...
Logitech G603 Lightspeed Wireless Gaming Mouse-22
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Sensor: HERO™ Resolution: 200-12000 DPI Buttons (Left/Right): 20-million clicks Max. speed: 400 IPS5 PTFE Feet: 250-km range LIGHTSPEED Wireless report rate in HI mode: 1000 Hz (1...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Play with hyper-fast, sub-1ms SLIPSTREAM CORSAIR WIRELESS TECHNOLOGY, or connect toawide range of devices with low-latency Bluetooth. Weighing just 96g, the KATAR PRO WIRELESS is...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Keyboard Backlighting: RGB Keyboard Layout: NA HID Keyboard Report Rate: 1000Hz Key Switches: CHERRY® VIOLA Matrix: 104 Keys Keyboard Connectivity: USB 3.0 or 3.1 Type-A Media Controls...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Mouse Dimensions: Height x Width x Depth: 85.7 mm x 126.0 mm x 48.4 mm Weight: 145 g Unifying Receiver Dimensions: Height x Width x Depth: 18.4...
Corsair CV Series CV650 650W 80 Plus Bronze Power Supply
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Stock Code: CS-CP-9020211-UK Brand: Corsair Model: RPS0128 AC Input: 100-240V Input Current: 10A-5A Frequency: 47~63Hz Total Power: 650W Warranty:3Years LOW-NOISE OPERATION A 120mm thermally controlled...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Hyper X Gaming Keyboard တွင် Key ခလုတ်တွေကို အမှားအယွင်းကင်းကင်းရိုက်နိုင်အောင် သေချာ ဒီဇိုင်းထုတ်ပေးထားပါသည်။ အကြိမ်ရေ သန်း(၈၀)အထိ ရိုက်နှိပ်ခံနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် စိတ်ချ ရသည့် အရည်အသွေးပြည့် ကီးဘုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Keyboard ကိုယ်ထည်အား လေယာဉ်ကိုယ်ထည် တွင်အသုံးပြုသည့် Aluminium ကိုအသုံးပြုပြီး တည်ဆောက်ထားပါသည့်အတွက် တောင့်တင်း ခိုင်မာမှု...
Logitech K480 Bluetooth Multi-Device Keyboard (Black)-22
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Warranty:3Years Full-size ကီးများ ထည့်သွင်းထားသည့်အတွက် စာစီစာရိုက်မြန်ကန်ပြီး ကီးဘုတ်၏ အနိမ့်အမြင့်အား ချိန်ညှိနိုင်သလို နေရာစားသက်သာရန်အတွက်လည်း လှပသေသပ်စွာ ဒီဇိုင်းဖော်ထားသည့် Logitech အမှတ်တံဆိပ်ကီးဘုတ်ဖြစ်သည်။ အလတ်စားအရွယ် မောက်စ်တစ်လုံးပါဝင်ပြီး HD optical tracking – 1000 dpi ရှိသည့်အတွက် ချောမွတ်စွာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ်အားချိတ်ဆက်ရန်အတွက် သေးငယ်သည့်...